Last nohavaozina: Mey. 17 2019 | 1
Rehefa ny baolina kitra Notre Dame kintan'ny Te'o Manti nihaona ny olon-tiany ao amin'ny Twitter aza izy dia tsy ahiana ny zavatra ho avy manaraka. Ny olon-tiany no maty nandritra ny afovoan'ny vanim-potoana ny baolina kitra, na, fara fahakeliny, dia nilaza izany. Raha ny marina, izy dia catfished amin'ny olom-pantatra, nandao Te'o vaky fo sy menatra. Ho an'ireo tsy nahafantatra izay zava "catfishing" dia, izany dia rehefa misy olona miseho amin'ny aterineto fa izy ireo dia olona fa tsy mba na hakàny vola na zavatra hafa avy amin'ny hahafantaran'ny niharam-boina. Amin'ny 2011, ny FBI tombanana ho manodidina $50.4 tapitrisa Very nandritra catfishing fisolokiana nanasongadina ny hamafin'ny izao fikasana.
Ahoana no hiarovanao ny tenanao amin'ny catfishing fisolokiana
Catfishing mora kokoa ny mamantatra fotsiny mitady zavatra izay toa tsy mifanaraka ny. Matetika, ny saka Fisher hilaza tantara fa tsy mitovy fotsiny. Fomba lehibe hafa koa ny mamantatra ny sandoka dia ny manontany ny mombamomba ny namana raha tena mahafantatra ny olona (rehefa saka ny ahiana ho namana Fisher ihany koa amin'ny namanao anaty aterineto). Raha toa ka tsy nisy fantatrao mbola nihaona ny olona toa izany fa tsy ry zareo izay lazainy izy ireo. Tsy azo atao mihitsy hevitra tsara raha toa ianao mahatsapa ho saka Niara-nanarato mankany aoriana hanamarina olona iray fotsiny ny tantara, ary jereo raha afaka mahita azy vaovao.
Mianara bebe kokoa momba catfishing sy ny fahasimbana mety mahatonga izany ny fanabeazana sary avy instantcheckmate.com.
Ary mitandrina Being Catfished Infographic
Ny fomba hahatongavana ho Safe Dating
Iza no Hoy ny Azonao Atao ny Tsy Nandeha avy Hatrany ny fitiavana?